Sary Nahazoan-Lalàna mitsangàna eo ambany na fanjakana federaly sy ny fitsipika mifehy ny tombontsoa, ny fitantanam-bola ny fiampangana, vola fandrosoana, ny fiampangana ho fanitarana ny voninahitra mihoatra ny mialoha ny nametraka fetra, ny tara sarany na fandikan-dalàna noho ny fiampangana, premiums amin'ny bola ny fiainana sy ny carte loza sy fiantohana ara-pahasalamana, isan-taona saram sy fiampangana hafa sy ny saram, sy ny maro hafaRaha ny raharaham-barotra famatsiam-bola ny mpanjifa, tsy maintsy manaraka ny lalàna federaly mahakasika ny varotra bola ny mpanjifa, ary koa ny toetry ny lalàna ao whichever fahefana izany no miasa. Federal sary nahazoan-ny lalàna dia ahitana ny Marina ao Mampisambotra Act (TILA), ny ara-Drariny Bola Billing Act (FCBA), ny Fitovian-Bola Opportunity Act, ny ara-Drariny Tatitra Bola Act (FCRA), sy ny ara-Drariny Trosa Famoriam-bola ny fomba Fanao Asa (FDCPA). Io Fihetsika io dia manampy mpanjifa fantatrareo izay izy ireo dia nanaiky ao amin'ny bola amin'ny raharaham-barotra. Izany dia mitaky ny raharaham-barotra mba hamoaka ny marina bola iombonana sy mifehy ny fomba bola mpamatsy afaka hanambara. Ilaina ampamoaka ahitana isam-bolana ny fitantanam-bola ny fiampangana azy, ny zanabola isan-taona, ny fandoavam-bola noho vita, tanteraka ny fivarotana ny vidin-javatra, sy ny fomba tara fiampangana ireo fanombanana sy ny fomba be izy ireo. Ity lalàna federaly mitantana billing fahadisoana amin'ny tantara bola. Ny mpanjifa tsy maintsy mampahafantatra ny carte mpanome izay ilaina ao anatin'ny andro ny diso-poana, ary ny crédit orinasa dia tsy maintsy mamaly ao anatin'ny andro. Ny tompon-trosa dia tsy maintsy mitarika ny antonony famotorana ary, ao anatin'ny andro ny fahazoana ny mpanjifa ny taratasy, hazavao ny antony mahatonga ny volavolan-dalàna ny marina na tsy marina ny fahadisoana.
Ny tsy fahombiazana ny tompon-trosa, ny manaraka dia hiafara amin'ny $ bola ny mankany an-tany vola, na raha toa ilay tolo-dalàna dia marina, ary ny tompon-trosa dia tsy afaka ny tatitra mikasika ny vola ho bola sampan-draharaha misahana mandra-ny tsy fitovian-kevitra dia tapa-kevitra.
Crédit orinasa dia mety tsy manavakavaka ny mpangataka ny fototry ny foko, loko, ny fivavahana, ny firenena niaviany, taona, firaisana ara-nofo, na ny sata ara-panambadiana. Ny hany azo hamarinina faladiany ho an'ny fihenan'ny mba hanitatra bola dia zavatra toy ny fangatahana ny sata ara-bola (vola sy tahiry) sy ny carte firaketana an-tsoratra. Na dia nisy aza ny fandraràna manohitra ny taona fanavakavahana, ny crédit orinasa afaka mandà ny mpanjifa izay tsy ampy taona. Izany no lalàna federaly voalohany indrindra mifandraika amin'ny bola tatitra ny sampan-draharaha. Izany dia miaro ny mpanjifa avy haiving ny taratasim-panamarinanao ho bola ny fikorontanana vokatry ny tsy feno na diso ny vaovao hita ao amin'ny tatitra bola. Ny lalàna no manome ny mpanjifa ny zo handray ny dika mitovy ny tatitra bola sy ny fanamby vaovao tsy marina voarakitra ao aminy. Raha ny raharaham-barotra ny fitaterana vaovao tsy marina dia tsy manova na mamafa ny vaovao tsy marina rehefa avy nampitandrina ny inaccuracy, ny mpanjifa dia afaka mampitombo ny -teny fanambarana ny antontan-taratasy manazava ny na ny lafiny ny tantara.
Ity lalàna federaly adiresy mahery setra ny fomba ampiasain'ny antoko fahatelo-trosa hetra.
Io fihetsika io dia afaka mamorona madio ho an'ny manorisory na mahery setra fanao, toy ny miteny ny olona hafa noho ny mpitrosa momba ny adidy, matetika miantso, niezaka nanangona be tsy noho ny, fanahy iniana tatitra diso be mba tatitra bola sampan-draharaha, sy ny sisa. Lahatsoratra nosoratan'i mpisolovava sy ny manam-pahaizana eran-tany miresaka ny lafiny ara-dalàna mifandraika amin'ny Mpitrosa sy ny tompon-Trosa ao anatin'izany ny: bankirompitra, famoriam-bola, bola sy ny antoka, ny trosa, ny fanarenana sy ny insolvency.
ny asa ao amin'ny fanomanana ny tahirin-kevitra mikasika ny sisin-tany ny fiarovana ny tontolo iainana faritra ny zavatra herinaratra grid foto-drafitrasa (Fandaharana), dia nanamafy ny Filankevi-pitantanana, ny Orinasa mampiasa amin'ny tany maro eo ambanin'ny zavatra amin'ny faritra tanteraka ny momba hektara ny termless tsara ny fampiasanaTao Ejipta, ny fepetra noraisina mba hanatsorana ny fomba fiasa ara-panjakana ny, inter alia, ny fanomezana ny fitsarana ny tolotra amin'ny iray nijanona-shop rafitra maro ny fitsarana, ny fanatitra amin'ny fitsarana ambony ny asa fanompoana amin'ny alalan'ny governemanta Ejiptiana ny vavahadin-tserasera, fanomezana ho an'ny zava-bita tsara ambanin'ny Tany sy ny Real Estate Tetik'asa, ny Banky iraisam-pirenena dia manana fotoana maharitra ny asa eo ambany Faharoa Tany Amin'ny lafy sy ny fahalemeny ny Lalàna"ao Amin'ny Fanjakana Real Estate Cadastre"voatanisa sy ny soso-kevitra teo izay azo atao ny fanovàna ny rafitra Ny famelabelarana nifantoka tamin'ny olana mifaninana hanatsara ny teknika sy ny fampiasam-bola manintona, zana-paritra stratejika fanomanana sy ny fanatanterahana ny paikady, zava-baovao sy R F varotra, ny fikambanana efa nafindra tao amin'ny united banky angona izay daily replenishes miaraka ny tahirin-kevitra avy amin'ny sampana rehetra ny faritra. ny governemanta dia mamela ny fanokafana ny tolobidy fomba ho an'ny safidy ny tetikasa mpiantoka.
Ny Lalàna Rosiana Consulting
Manolotra isan-karazany ara-dalàna ny asa, ao anatin'izany ny: notary sy ara-dalàna ny asa fandrafetana, notarizing sy ho ara-dalàna ny herin ny mpisolovava nanoro hevitra amin'ny malalaka isan-karazany ny lalàna rosiana fikirakirana litigations ao Rosia sy manampy ny mpanjifa amin'ny fametrahana sy miasa ny raharaham-barotra ao RosiaAmin'ny fomba izany no zava-baovao sy mora mahatsapa ny zavatra ilain'ny mpanjifa, dia manome ara-dalàna ny asa ara-potoana sy vola-fomba mahomby. Dia manolotra olona hanontaniana ny hevitry ny olom-pirenena any Rosia miaina any ETAZONIA amin'ny resaka: ny lalàna sivily, ny fianakaviana lalàna, lova lalàna ao amin'ny Federasiona rosiana, ary koa ny zom-pirenena fanontaniana. Isika volavolan, notarize sy ny ara-dalàna (miaraka amin'ny apostille araka ny Hague fivoriambe) tahirin-kevitra, tafiditra ao anatin'izany ny hery ny mpampanoa lalàna sy ny fifanarahana, mba ho ampiasaina ao Rosia. Isika dia manome feno isan-karazany ny notary asa: fanamarinana ny dika mitovy (izany hoe ny tena dika) ary ny fanaovan-tsonia probate olana (teni-vavolombelona ihany ny dia) fanamarinana ny fandikana ny fandraisana ho mpikambana fa ny olona iray dia velona (ho an'ny fisotroan-dronono tanjona), teo am-ny manokana toerana sy fotoana, ary na ny iray aseho amin'ny sary ny fandraisana ho mpikambana amin'ny fotoana ny fampiharana ny fanekena sy ny taratasy fanamarinana ny famantarana vaovao mifanaraka amin'ny lalàna ao amin'ny Federasiona rosiana.
Ny Hetra Hanaraha-Maso - Rosia
dia noho izany antony izany isika
Fanomanana ny dingana ho amin'ny sehatry ny hetra hanaraha-maso amin'ny rosiana ny hetra ary ny manam-pahefana nandritra izany famerenana isika dia hamantatra ny hetra ny loza mety hitranga eo amin'ny raharaham-barotra ary ny fahazoan-dalana hidirana ny vahaolana noho ny fanafoananana ny fampihenana. dia toy izany no. ianao dia manamaivana izay azo atao hetra sazy ara-bola - amin'ny tranga rehefa misy ny orinasa ho toy ny mba hampihena ny hetra enta-mavesatra sy manatsara ny hetra vola amin'ny Tetibolam-Panjakana. dia hitarika ny hanaraha-maso ny asa sy ny fahazoan-dalana hidirana ny fomba azo atao mba hampihena ny habetsaky ny hetra ny vola lany. dia toy izany ianareo dia hahatakatra ny hetra mety ho ao amin'ny orinasa.
Ny fisaraham-panambadiana Fizotry ny rosiana olom-Pirenena
Ara-dalàna miteny, ny firongatry ny fianakaviana vaovao dia voasoratra fiovana ao amin'ny olona iray ny fianakaviana, ny sata ao amin'ny firaketana an-tsoratra ao amin'ny Tafaray Fanjakana ny banky Angona an-trano ny Fisoratana anarana (base de données)Ity rakitsoratra ity toa tsy ampy taona, fa izany dia mitaky ara-dalàna vokatry ny samy olona. Noho izany, raha ny vadiny dia avy eo manapa-kevitra ny fisaraham-panambadiana, ny voalaza teo aloha, an-tsoratra dia tokony ho niova correspondingly. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, ara-panjakana ny fomba antsoina hoe ny fisaraham-panambadiana, tahaka eo amin'ny fiainana andavanandro. Maningana hitsangana amin'ny toe-javatra izay iray amin'ireo vadiny dia manohitra ny fisarahana am-panambadiana sy (na) ny mpivady manana ankizy tsy ampy taona. Amin'ny toe-javatra toy izany, ny fisaraham-panambadiana dia miroso amin ny mifanitsy amin'ny fitsarana rosiana.
Ao amin'ity lahatsoratra ity isika no hijery afa-tsy ny fenitra ara-panjakana ny fomba.
Samy mpivady dia manaiky ny fangatahana endrika ho fisaraham-panambadiana ao anatin'ny Lisitra Birao. Famaranana ny fanambadiana miorina amin'ny ny hany fampiharana mety hitranga amin'ny toe-javatra izay, ohatra, ny vadiko dia ekena ny fitsarana, toy ny tsy hita, incapacitated na sazy an-tranomaizina mihoatra ny taona. Misy antontan-taratasy izay mampiasa ny fiteny hafa avy amin'ny rosiana ho nadikan'i ekena notary ho rosiana. Raha ny fampiharana ao amin'ny Firenena ivelan'i Rosia, ny notary fandikan-teny dia mety atao ao amin'ny Masoivoho rosiana. Mba hamarana ny fanambadiana, ny vadiny dia mila manondro ny Firaketana Birao amin'ny toerana honenana na any amin'ny toerana ny fanambadiana. Ny vadinao, dia afaka mangataka fisaraham-panambadiana ao amin'ny Masoivoho rosiana ao amin'ny firenena izay izy izy dia velona. Amin'ny toe-javatra ireo fa tsy ny fisaraham-panambadiana sarany, ny masoivoho saran'ny dia ho karama fa tsy. Amin'ity tranga ity, ny fanambadiana dia ho faranana amin'ny solontenan'ny fitsarana rosiana. Izany dia tokony ho nilaza fa ao ny tsy fisian'ny ny fankatoavana ny iray amin'ny mpivady ho amin'ny fisaraham-panambadiana, ny fitsarana dia manana zo handray fepetra mba hampihavana ny mpivady sy ny fanemorana ny fitsarana ho tsy mihoatra ny volana. Eny, amin'io lafiny io, izy izy dia afaka manome alalana ara-dalàna ny solontenan'ny hametraka ny raharaha fisaraham-panambadiana any amin'ny manan-danja ny fitsarana rosiana sy hisolo tena azy azy nandritra ny fakàna am-bavany. Rehefa afaka volana izay avy amin'ny fanekena ny fangatahana fisaraham-panambadiana, raha tsy vady mihatra noho ny fanafoanana, ny manam-pahefana hamorona ny mifanaraka amin'izany firaketana an-tsoratra sy ny olana momba ny fisaraham-Panambadiana Taratasy fanamarinana. Taloha vady na ny ny ara-dalàna ny solontenan'ny dia tsy maintsy mahazo ny taratasy fanamarinana amin'ny alalan'ny tenany.
Ny ara-Dalàna: any Eoropa, ny Moyen-Orient Afrika, Rosia, ny Asa soso-kevitra ny Lalàna sy ny orinasa, ny Mpisolovava
PwC ara-Dalàna (PricewaterhouseCoopers ara-Dalàna CIS B
Fantaro izay lalàna orinasa no misolo tena izay Asa mpanjifa ao Rosia ny mampiasa ara-Dalàna ny ny vaovao feno banky angona ny lalàna mafy mpanjifa fifandraisanaBaker McKenzie - CIS, Limited 'idirana', 'tena manam-pahalalana ekipa lehibe litigators' manoro hevitra momba ny ara-dalàna dalàna tao amin'ny olombelona ny loharanon-karena (HR) varotra, ny varotra union zava-dehibe sy ny asa fiarovana ny olana, ary koa fomba maro ny angon-drakitra manokana ny fiarovana ny raharaha. Igor Makarov loha ny fanao, izay ny Finoana, Novo Nordisk sy AstraZeneca dia manan-danja ny mpanjifa. Dentons' vondrona 'ny fahalalana tsara ny asa an-tsaha sy manan-danja ny tranga lalàn', ary dia nidera noho ny 'be pitsiny nandresy ny paikady-pitsarana'. Marina Ryzhkova loha ny fomba fanao, ary manana 'matanjaka ara-teknika ny fahalalana, ny lalina sy ny samy hafa isan-karazany ny zavatra matihanina' sy ny 'afaka handresy ny asa fifandirana matihanina hafa mikasika ny maha-fanantenana'. Mafy dia mafy ny lalana firaketana amin'ny olona fandroahana faobe sy ny lay-offs. ALRUD Lalàna Mafy ny 'za-draharaha, mavitrika sy ny raharaham-barotra-mirona' team 'misy foana mba hanome fanampiana raha ilaina' ary mandresy plaudits noho ny 'fahaizany mba hahitana ny tena fomba azo atao mba hanapa-kevitra saro-pady ny fifandirana'. Irina Anyukhina loha ny fomba fanao sy manoro hevitra amin'ny HR fanajana, ny anatiny ny famotorana sy ny asa ny olana momba ny orinasa restructurings. Andrey Gorodissky Mpiara-miasa dia 'ny fahalalana lalina ny mpanjifa tsirairay ny orinasa avy amin'ny asa ny lalàna fomba fijery' ary 'fahatakarana mafy ny eo an-toerana ny asa an-tsena'. Fomba fanao lohany Marina Abramova vao haingana nanoro hevitra IM Injeniera Asa amin'ny fitsipi-pifehezana ny sazy mikasika ny mpiasa. Bryan lava-bato Leighton Paisner (Rosia) LLP manoro hevitra momba ny angon-drakitra fiarovana ny olana, ny fifindra-monina ny lalàna sy ny fahasalamana sy ny fiarovana ny fomba fanao, ary manana mahery manara-maso ny firaketana an-tsoratra ao amin'ny asa-pitsarana. Nadezhda Ilyushina loha ny ekipa ary tohanan'ny ambony mpiara-miasa Yuri Ivanov, izay 'afaka manolotra hamolavola vahaolana ny sarotra ny toe-javatra'. DLA Piper ny 'manam-pahalalana ekipa 'mpisolo vava' dia manome 'mailaka valinteny fotoana', ary vao haingana nanoro hevitra Coty amin'ny isan-karazany ny asa sy ny fanajana ny zava-dehibe amin'ny fifandraisana amin'ny maso. Ny ekipa ihany koa ny manoro hevitra Duracell, Gett sy FMC amin'ny rosiana isan-karazany ny asa lalàna olana.
Konstantin Astafiev no isa manan-danja
Vladislav Mazur famohana ny asa-pitsarana, ny fifindra-monina ny lalàna ny olana sy ny angon-drakitra manokana ny fiarovana ny raharaha. V.) niavaka ny fahaizany manokana ao amin'ny hetra momba ny olana sy HR fitantanana, ary tsy tapaka, manoro hevitra amin'ny miampita sisintany asa ny olana. Yana Zoloeva loha ny ekipa, ary 'tena za-draharaha' Alexei Dingin afaka 'mazava tsara ny hanazavana be pitsiny ny lalàna ny fepetra ho tsy matihanina'. Pepeliaev Vondrona 'foana ny mamaly ao anatin'ny nanaiky ampaham-potoana' ary manome 'ny lalina mety fandalinana ny tsirairay na miaraka amin'ny torohevitra momba ny fomba hanalefahana noho izany'. Fomba fanao lohany Julia Borozdna no 'tena personable' sy manoro hevitra amin'ny asa fifandirana. CMS manome 'ny asa fanompoana lehibe eo ny valinteny fotoana sy ny vola lany', ary 'matanjaka, maro-miainga traikefa maro manerana sehatra'. Valeriy Fedoreev mitantana ny asa sy ny fifindra-monina izany fomba izany, ary vao haingana no nanoro hevitra Peugeot Citroën Fiara Mitsubishi amin'ny fitarainana avy ny mpiasa momba ny asa vaovao fotoana tetika. Debevoise Plimpton LLP voalohany indrindra manoro hevitra momba ny asa ny olana hitsangana avy M A, mizara tsara ny fahazotoana noho ao, ary ny fividianana sy ny fihazonana ny, manan-danja ny mpiasa. Ny ekipa ihany koa ny manoro hevitra ny spectrum feno ny resaka fifindra-monina, isan'izany ny asa fahazoan-dalana, famindrana sy miampita sisintany HR politika olana. Dmitri Nikiforov loha ny fanao. Dechert Rosia LLC manoro hevitra ny olana momba ny fampitahorana miseho avy amin'ny asa ny fifanarahana, ny fandroahana, ny angon-drakitra fiarovana ny raharaha sy ny varotra zava-miafina fanodikodinam. Ny vondrona dia tarihin'ny Evgenia Korotkova, izay efa niavaka ny fahaizany manokana ao amin'ny M A - ary ny mpiara-barotra mifandraika amin'ny asa ny olana. Amin'ny teny rosiana ny Mpisolovava an-Tserasera, manasongadina tafiditra nanoro hevitra Cisco ao amin'ny isan-karazany tsy nahabe resaka momba ny asa sy ny mpiasa olana, ary manampy ny vy orinasa amin'ny sendika mikasika ny raharaha.
Senior mpiara-miasa Anna Ivanova loha ny ekipa, nanoro hevitra momba ny fifangaroana ny fifindra-monina sy ny fandroahana ny olana.
Freshfields Bruckhaus Deringer manome fanohanana mitohy ho Bristol-Myers Squibb mikasika isan-karazany HR olana hitsangana avy ao anatiny reorganisation. Olga Chislova loha ny ekipa, izay misy hafa manan-danja ny mpanjifa dia ahitana rosiana fitaterana an-dalamby, Flowserve sy ny Konstantin an'i khabensky Charity Foundation. KIAP (Moskoa Mpisolovava an-Tserasera, Mpisolovava amin'ny Lalàna)'s 'mpanjifa-mirona' ekipa ny manome 'ny fifadian-kanina valin-kafatra sy ny lanjany lehibe ho an'ny vola'. Vao haingana ny asa dia ahitana nanoro hevitra Doosan ny leon'ny maro mpitantana ambony, ary manampy Panalpina amin'ny tolotra fifanarahana noho ny asa staffing. Noerr ny ekipa 'manaiky, manampy sy mazava ao ny toro-hevitra', ary 'foana afaka hihaona mafy ny fe-potoana farany'. Fomba fanao lohany Alexander Titov efa malaza fahaizana amin'ny olana mahakasika an-tampony ny fitantanana, anisan'izany ny fandroahana toe-javatra sy asa fifandirana. Torohevitra Olga Mokhonko no 'tena matihanina sy haingana ny navalin'. Asa boutique Mpiasa Lalàna Birao dia tarihin'ny Sergei Kuksa, izay efa manan-danja ny fahaizana amin'ny fitsipi-pifehezana ny fombafombam-pitsarana, ny fifindra-monina olana sy ny didy amam-pitsipika ny raharaha miaraka amin'ny asa fifandirana.
Malaza mpanjifa ahitana AccorHotels, ny Ericsson sy Red Bull.
Tarihan'ny Irina Golovanova, Squire Patton Boggs vao haingana ampiasaina ny isan'ny herisetra ara-nofo ny fifandirana, ary koa ny manoro hevitra amin'ny fandroahana, ny mpiasa redundancies sy ny fampisehoana reviews.
Mafy dia mafy ny hazo fijaliana-sisin-tany fahaiza-manao, ary tsy tapaka liaises sy ny pan-Eoropeana birao mba ho mpanoro hevitra ao amin'ny avo-tsatòka olana. Ny ara-Dalàna, ara-Dalàna ny Raharaham-barotra, GC Gazety sy Ny Tao-Trano Mpisolovava hetsika Zurich nitondra isan-karazany Soisa ny tsara indrindra ao-trano hiaraka hifandinika mba hankalaza ny fandefasana ny GC Powerlist: Soisa Ekipa. Miaiky ao-trano zava-baovao, ny lenta sy tsara indrindra, ny GC Powerlist: Deutschland mamaritra ny karazana nanan-kery indrindra sy mitondra zava-baovao ao-trano torohevitra miasa ao Alemaina. Miaiky ao-trano zava-baovao, ny lenta sy tsara indrindra, ny GC Powerlist: Frantsa mamaritra ny nahay ny tena nanan-kery sy mitondra zava-baovao ao-trano torohevitra miasa any Frantsa.
Fanafihana mitam-piadiana: ny Lalàna sy ny Sazy - Fiarovana heloka Bevava rosiana Mpisolovava
Ny olona iray manao fanafihana mitam-piadiana izy rehefa mandray ny zavatra avy amin'ny olon-kafa, amin'ny fampiasana herisetra na fandrahonana, raha mitondra ny mampidi-doza, fitaovam-piadianaAo amin'ny ankamaroan'ny firenena, ny"fanafihana mitam-piadiana"dia tsy miavaka ny heloka bevava. Fa tsy, mpiaro ireo voampanga tamin'ny heloka bevava fantatra amin'ny anarana hoe"vao maika mampitombo ny halatra"ny Fampiasana ny mampidi-doza, fitaovam-piadiana fototry ny mampitombo ny lafin-javatra, izay mahatonga ny heloka lehibe kokoa noho ny halatra tsotra, izay tsy mahakasika ny fitaovam-piadiana.
Ny fampanoavana dia tsy maintsy manaporofo ny manaraka, fantatra amin'ny anarana hoe ny"zavatra"fanararaotana, na fanafihana mitam-piadiana.
Raha tsy ny mpitsara mahita mihoatra noho ny antonony antoka fa singa tsirairay efa voaporofo, dia tsy maintsy acquit ny voampanga. Halatra manomboka rehefa misy olona maka ny fananana manokana (fa tsy ny fananan-tany, toy ny tany na ny trano) fa olon-kafa manana, tsy misy ny olona ny fanekena. Ny niharam-boina mila tsy tena manana ny zavatra nalaina dia ampy fa izy dia tsotra ny zara-tany. Ohatra, amin-kery ny fandraisana ny trano famakiam-boky avy amin'ny olona iray ho mendrika izany, na dia ny niharam-boina tsy manana ny boky. Tsy toy ny halatra tsotra (toy ny fandraisana zavatra iray avy amin'ny fivarotana), halatra mitaky ny fandraisana zavatra iray avy ny olona.
Izany dia ahitana ny tsy fandraisana zavatra iray avy ny fihazonan, toy ny mikapoka olona iray mba hahatonga azy ho very ny fihazonan ny kitapo, fa mandray ny zavatra avy amin'ny olona eo anatrehan'ny.
Zavatra izay ao anatin'ny olona ny fisiany dia akaiky ny niharam-boina sy ao anatin'ny ny fanaraha-maso. Ohatra, hangejana ny mpiasa ao amin'ny storeroom taorian'ny fanerena ny clerk hanokatra ny azo antoka dia anisan'ny halatra, satria ny azo antoka dia eo ambanin'ny fanaraha-maso ny mpiasa. Fomba iray hafa ny fahazavan-tsaina izany ny milaza fa ny vola ao ny azo antoka dia ao ny mpiasa ny fanaraha-maso ao fa afaka nisakana ny fandraisana nefa ny jiolahy ny fandrahonana na herisetra. Hoy ny sasany, na izany aza, tsy mitaky fa ny zavatra azo nalaina avy ny olona, na eo anatrehany. Ao ireo milaza, amin'ny fampiasana ny herisetra na fandrahonana izay mitohy amin'ny halatra dia ampy. Ny lalàna dia mitaky fa ny voampanga raha ny marina dia mitondra ny fananana hatrany, na dia kely fotsiny aza. Indraindray, fotsiny ny fampiharana ny fanaraha-maso ny zavatra nalaina ho ampy. Ohatra, raha ta-haka ny fakan-tsary, ny mpangalatra ny toerana tanany momba ny raharaha fa mihantona avy ny niharam-boina ny sorony. Na dia nijanona aloha dia mety hanosika azy, any amin'ny ankamaroan'ny firenena, ity hetsika ity dia ho ampy ho an'ny"fanaraha-maso"Ny olona izay efa nalaina hafa ny fananana dia tsy maintsy natao tamin'ny fotoana maharitra manaisotra ny niharam-boina ny izay fananana. Mandray zavatra amin'ny tanjona ny mampiasa azy io amin'ny fomba izay miteraka ny avo azo inoana fa izany dia ho voafafa tanteraka ampy. Ohatra, naka ny finday niaraka tamin'ny fikasana ny fampiasana azy, ary nandao izany dia miteraka betsaka mety fa izany dia tsy ho tafaverina. Maka olona iray ny fananana fandrobana raha misy fampiasan-kery no ampiasaina mba hahazoana izany. Nanosika ny olona iray teo, mikapoka olona iray, ny ady tolona zavatra avy ny niharam-boina ny hahatakatra rehetra ohatra ny herisetra. Misy tsy tokony ho be dia be ny hery ny hazavana manisy tahamaina na ny mitady handrapaka ny kitapom-bola andilany dia hatao.
Halatra ihany koa dia afaka ho tanteraka amin'ny alalan'ny fampitahorana ny olona iray ny fametrahana olona ao amin'ny tahotra.
Fa hoy ny sasany, fa ny tahotra dia tsy maintsy antonony ny valiny na olon-tsotra ao amin'ny toerana misy ny niharam-boina. Hafa firenena ho isaina ny niharam-boina ny tsy valiny (ny valin ny olona iray toy ny mahazatra mora ny fandrahonana), raha mbola toy izany no nateraky ny voampanga ny asa. Fomba nentim-paharazana, ny fandrahonana ilaina mba ho iray lehibe ny ratra na ny fahafatesana, na ny famongorana ny tranon'ilay niharan-doza ary ny loza mitatao ilaina mba ho akaiky ny ratsy. Ohatra, mandrahona ny hanao ratsy ny niharam-boina ny fianakaviana ny volana maro noho izany dia tsy ho ela ampy ho toy ny loza mitatao. Araka ny fanazavana etsy ambony, ny"fanafihana mitam-piadiana"dia matetika ho toy ny vao maika mampitombo ny halatra, izay mitaky ny fampiasana ny mahafaty na mampidi-doza, fitaovam-piadiana. Misy ny kely adihevitra na ny fampandehanana basy dia raisina ho toy ny mahafaty na mampidi-doza fitaovam-piadiana. Fa zavatra hafa dia afaka ny ho mendrika, raha mbola raiki-tampisaka izy ireo mahafaty, na raha tsy izany, ampiasaina amin'ny fomba izay mahatonga na dia mety hiteraka ratra ara-batana goavana na fahafatesana. Maro ny adihevitra manodidina ny zavatra toy ny antsika malagasy, dia nitondra tehina, ny biby, ny faritra amin'ny vatan'ny olombelona, sy ny fiara. Ny singa farany ny fanafihana mitam-piadiana dia mahakasika ny fampiasana ny mahafaty na mampidi-doza, fitaovam-piadiana. Ny voampanga mazava tsara ny manao izany rehefa mamely ny niharam-boina na afo ny basy, fa izy koa izany no izy rehefa ny fampirantiana na mitondra fitaovam-piadiana sy ny mandrahona ny mampiasa azy io. Ireo izay voampanga miaraka amin'ny fanafihana mitam-piadiana foana ny manana misy ny fiarovana ny"maha diso"fa ny halatra mety ho nitranga, fa ny voampanga tsy manao izany. Hoy ny sasany dia mety hamela ny filazana ny voampanga fa izy no naka afa-tsy izay dia ny.
Ara-teknika, noho ny halatra dia mitaky ny fandraisana ny fananana hafa ny fikasana mandrakizay manaisotra izany olona izany (jereo ny"Nihevitra tanteraka manaisotra ny tompon '"etsy ambony), raha toa ka ny voampanga no retaking inona no nataony, ny ny fanenjehana, dia tsy ho afaka manaporofo izany ny singa ny fandikan-dalàna.
Fa hoy indrindra dia tsy voly ity fiarovana, ny antony fa dia mamporisika mampidi-doza tena hanampy ny fepetra izay matetika loatra mitondra ratra sy ny ratsy. Halatra ny heloka bevava, na inona na inona momba ny lanjan ny zavatra noraisina. Ny ankamaroan'ny firenena hanasazy ny fanararaotana halatra, izay midika mampidi-doza na fitaovam-piadiana mahafaty, anisan'izany ny basy, tena mafy. Toy ny misy heloka bevava poana, izany dia tena ilaina ny manatona miaraka amin'ny heloka bevava ny mpisolovava azy ireo ho toy ny tany am-boalohany araka izay azo atao, ao ny raharaha. Za-draharaha ny fiarovana ny mpampanoa lalàna dia ho afaka mba hanampy anao hahatakatra ny fiampangana anao sy ny vesatry ny porofo ny fanenjehana mikasa hamokatra. Mpisolovava tsara dia ho afaka ny zava-misy hijery ny vintana amin'ny voaroaka, na mihena ny fiampangana, fiangaviana ny fifanarahana, na ny mety ho voka-dratsy tokony handeha ny fitsarana ireo voampanga. Hany olona izay zatra ny fomba ny mpampanoa lalàna sy ny mpitsara ao an-trano fitsarana ny fomba toe-javatra toy ny anareo, dia ho afaka hanome ianao ity tena ilaina vaovao.
No tena mila ny herin ny mpisolovava ho an'ny fiara
Araka ny Governemanta ao amin'ny Federasiona rosiana
Ny Federasiona nandray ny fanapahan-kevitra amin'ny fanitsiana iray ny governemanta miasa (mitondra ny datin 'ny novambra), ny fanontaniana na ny herin' ny mpampanoa lalàna dia ilaina ho an'ny fiara dia tena very ny maha-zava-dehibeIndrindra indrindra, ny kabary eo amin'ny fanapahan-Kevitra ihany koa ny mikasika ny fomba vaovao amin'ny fampiasana ny herin ny mpisolovava.
Voalohany indrindra, ny fanovana mikasika ny fomba fitsaboana ho an'ny manolotra ny herin ny mpisolovava ao amin'ny toe-javatra sasany nanome ny lalàna.
Voalohany, isika lisitry ny toe-javatra, raha ny herin ny mpampanoa lalàna dia tsy maintsy hentitra, ary avy eo isika dia tsy miresaka momba ny toe-javatra hafa.
Fahazoana MTPL politika dia iray amin'ireo fewcases rehefa izany dia takiana mba hanolotra ny herin ny mpisolovava ny fiara.
Fa rehefa avy nandray ny politika OSAGO, izy dia hanao toy ny herin ny mpampanoa lalàna, satria afaka midira tanteraka izay rehetra azo itokisana ny tompon'ny fiara. Noho izany, amin'izao fotoana izao dia mila mampiseho afa-tsy ny politika OSAGO sy ny zon'olombelona, ary, mazava ho azy, ny tahirin-kevitra eo amin'ny fisoratana anarana ny fiara. Toe-javatra hafa, raha ny fanolorana ny herin ny mpampanoa lalàna dia mbola tsy maintsy, dia afaka ahitana ny toe-javatra ny toerana ilay milina ny firaketana an-tsoratra ary nitondra azy ireo niala ny misoratra anarana, ary koa raha toa hitondra ny fiara avy amin'ny fitobiam-piarakodia.
Izao toe-javatra toy izany dia tanteraka nanjaka avy
Amin'ny toe-javatra ireo, ny MTPL fiantohana politika dia tsy ho ampy. Tsy misy, ny lalàna vaovao abolishes ny fampahafantarana ny mpiasa DPS herin ny mpampanoa lalàna fa tsy mahazo mitondra fiara. Raha ny antontan-taratasy fisoratana anarana, ny zo politika sy ny OSAGO ao an-toerana, dia tsy misy intsony ny antontan-taratasy avy amin'ny mpitandro ny fifamoivoizana avy aminao ny milaza fa tsy azo atao. Noho izany, raha toa ka mipetraka ao ambadiky ny kodiarana, fa tsy manana izany fiara, izay rehetra ilainao (mazava ho azy, afa-tsy ny zo sy ny fiara antontan-taratasy fisoratana anarana) fa ny anarana ho voasoratra ao amin'ny MTPL politika.
Ity no tena mety, satria teo aloha mpamily izay nandeha tany amin'ny alalan'ny taratasy fanomezam-pahefana, matetika mijaly noho izany.
Noho izany, noho ny overdue herin ny mpampanoa lalàna, ny mpamily dia ho afaka mora foana handoa onitra an-jatony maro robla, sy ny fiara ny tenany dia matetika nalefa tany amin'ny fitobiam-piarakodia.
Toy ny polisy mpandrindra fifamoivoizana, nihaona izy ireo izany vaovao izany no tena nisakana. Ny manam-pahefana amin'ny mpitandro ny fifamoivoizana mino fa mifandray amin'ny fanafoanana ny herin ny mpampanoa lalàna, ny isan'ny fiara halatra be afaka mampitombo ny. Ny zavatra fa raha ny politika OSAGO dia nivoaka tsy an-kanavaka, dia saika tsy ho vita ny hamaritra hoe iza no ao ambadiky ny kodiarana fiara - nitokisany na ny fandaharana. Noho izany, ny polisy nampitandrina ny tompon'ny fiara fa tsara ny mitahiry ny antontan-taratasy, satria ny hahita ny halatra fiara mety tsy ho foana. Ny fanontaniana toy izany dia hita eo anivon ny tompon'ny fiara matetika, sy ny valiny, mandritra izany fotoana izany, dia tena tsotra: ny amin'ny tsy misy. Tsy misy toe-javatra rehefa atao ny mangataka ny panjakàna herin ny mpampanoa lalàna fa tsy mahazo mitondra fiara. Ny zava-misy fa ny notarial fanamarinana ny efa misy ny fifanakalozana nataony tamin'ny fiara dia tsy omena noho ny nataon'ny lalàna. Noho izany, dia tsy mila mandoa notarial fisoratana anarana 'ny herin' ny mpisolovava fotsiny noho izany dia tsy ampiasaina ho anao. Notarially voamarina ny herin ny mpampanoa lalàna avy amin'ny tompon'ny fiara indraindray dia ilaina aloha, fa amin'izao fotoana izao ny mila ho azy nanjavona tanteraka.
Ny fomba amam-panao ny mpahay lalàna, Lalàna Orinasa ao Rosia ho an'ny Isan-Tanàna rosiana Mpisolovava Fakan-kevitra an-Tserasera rosiana ny Lalàna
Padova Epshteyn dia iray amin'ireo mpitarika orinasa lalàna ao Rosia, manolotra isan-karazany ny feno ara-dalàna ny solutions hihaona ny mpanjifa' ny mpandraharaha filànaMpiara-miasa sy mpiara-miasa ny Padova Epshteyn dia tena mahay ny manam-pahaizana mpisolovava manokana ao amin'ny orinasa, ny fitantanam-bola, ny hetra, ny fomba fanatanterahana, ny tany lalàna sy. Zoran Lalàna Birao dia mandroso ny lalàna rosiana mafy amin'ny kilonga mifantoka amin'ny Fananana ara-Tsaina ny Lalàna sy ny Pitsarana Fanelanelanana ny asa ny orinasa vahiny miasa amin'ny Federasiona rosiana sy ny CIS, sy ny rosiana orinasa miasa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena na ny fisarihana ny fampiasam-bola vahiny. Rosiana mpampanoa lalàna dia naorin'i Atoa Andreas Sophocleous tamin'ny. Ny orinasa dia ankehitriny dia iray amin'ireo lehibe indrindra sy mahomby indrindra lalàna orinasa-bahoaka any Shipra sy Atsinanan'i Eoropa. Ny tena birao dia misy ao Limassol, ny offshore raharaham-barotra foibe Shipra, amin'ny sampana ao Maosko sy Kiev, London ary Tbilisi. Niorina tamin'ny taona, Konnor Sonosky iray ao Okraina lalàna nitarika orinasa, amin'ny anjara fanompoana ao Kiev, Chernovtsy, Londres, Moscou sy Nicosia. Ny orinasa dia ny laharana eo ambony okrainiana lalàna orinasa araka Yuridicheskaya Practika ("ny Fampiharana Ny Lalàna") - isan-taona ny fanadihadiana. Mirehareha isika. Ny Pasifika Lalàna Orinasa rosiana ny lalàna mafy misahana manokana ny fampiharana ny raharaham-barotra ny lalàna sy ara-panjakana nanomboka ny janoary. Mpisolovava amin'ny Pasifika Lalàna Orinasa manatanteraka ny asa araka ny avo indrindra misy ny matihanina sy ny misarika ny be dia be ny fifandraisana eo. Ter-Sarkisov sy ny Mpiara-miasa dia faly manolotra anao ny asa mahay sy za-draharaha matihanina ao amin'ny heloka bevava sy sivily toe-javatra. Tena mahay ny mpisolovava, izay efa an-taona maro ny traikefa eo amin'ny fampiharana ny lalàna, ny fitsarana sy ny arbitral vatana, dia efa misy ara-dalàna ny fanampiana olona.
Orinasa rosiana, no hanatevin-daharana ny hery hamoronana Superjet orinasa sata zotram-piaramanidina
Ao rosia tsy manam-paharoa raharaham-barotra, ary ara-tontolo iainana efa niteraka ny iray hafa ny exotic fanantenana - ny vaovao dia te-ho zotram-piaramanidina fa dia voalaza fa specialise ao an-toerana ny orinasa travel sata sidina fampiasana maromaro izay ahitana Superjet (SSJ) isam-paritra jet andian-tsamboMaro ny avo-ny mombamomba ny rosiana tsy miankina sy ny fanjakana tantanan'ny orinasa, ahitana ny SSJ mpanamboatra ny ray aman-dreny United Fiaramanidina Corporation (UAC), fiaramanidina lessor state-run VEB-Leasing, Moskoa raikitra fototra mpandraharaha Vnukovo, ny tsy miankina rehetra-Superjet andian-mpandraharaha Azimuth Airlines sy ny tsy miankina-Pirenena Reserve Corporation (NRC), dia nifanaraka ny rehetra fa hanambatra ny hery hitondra ny hevitra ny zava-misy. Nivory tao amin'ny rosiana ny Fampiasam-bola amin'ny Forum tao Sochi, ny mpiara-nanao sonia ny taratasy ny finiavana tamin'ny febroary ho an'ny fananganana orinasa sata zotram-piaramanidina mampiasa Superjet s. Ny tetikasa dia ny hevitra avy Alexander Lebedev, ny tompon'ny NRC sy ny gazety Britanika Ny tsy Miankina, izay, ao ny lasa, dia manan-danja traikefa amin'ny fitantanana ny fifamoivoizana an'habakabaka ny raharaham-barotra. Lebedev voalohany naneho ny hevitra vaovao ny orinasa mandeha fiaramanidina ny volana May amin'ny taona, rehefa nanatona ny rosiana ny governemanta miaraka amin'ny soso-kevitra mba hanatsarana maro araka SSJs ny VIP fitsipika. Raha toy izany ny sambo natao, Lebedev nanambara izy dia vonona ny hampiasa vola ao amin'ny fananganana ny zotram-piaramanidina fa dia mifantoka kokoa ny fampiononana air travel -"amin'ny vidiny isan-jato avo kokoa noho Aeroflot ny premium fanompoana"Ny foto-kevitra dia ny hoe ny orinasa dia maka ny endriky ny vahoaka tsy miankina, ny fiaraha-miasa izay ny governemanta dia mandray anjara amin'ny SSJ fiaramanidina sy ny tsy miankina, ny mpampiasa vola dia ny fitantanam-bola ny customization ho VIP kirakira.
Vokatry ny tombom-barotra ho zaraina amin'ireo mpandray arakaraka ny shareholding.
Ny vao-nanao sonia taratasy ny finiavana dia mitaky fa isaky ny fiaramanidina - izay raha ny tokony ho afaka ny seza mpandeha iray mahazatra feno toe-karena fisehon'ny - dia fa tsy endri-javatra"ny raharaham-barotra-kilasy kirakira miaraka mpandeha seza"ary dia niasa ho an'ny"sata (on demand) sidina ny tombontsoan'ny lehibe [rosiana] ny orinasa, ny fanatanjahan-tena ekipa, fampisehoana tours sy ny hafa vondrona travel", Araka ny taratasy ny finiavana, ny mpiara-miombon'antoka efa nanaiky manao vinavina ara-bola sy ny hamelabelatra ny ankapobeny firafitry ny fifanarahana, mandrindra ny isan'ny fiaramanidina mba ho anjara, sy hampivelatra ny antsipiriany ny tondrozotra ho an'ny tetikasa. Ny vaovao zotram-piaramanidina dia mety mampiasa ny Rivotra Mpandraharaha ny Taratasy fanamarinana natao Azimuth Airlines ary dia monina ao Moskoa ny Vnukovo seranam-piaramanidina. Indrindra, na ireo orinasa manana Vitaly Vantsev toy ny mpiara-tompony, izay efa nanamarika fa ny zava-niainany amin'ny Azimuth"mampiseho ny fitadiavana avo-paritra travel"ao Rosia. Izy ihany koa dia nanamafy fa ny fandraisana anjaran'ny Vnukovo- mety ho"mora ny manome aina ny tany sy ny fiaramanidina manazava ny asa sy ny dia ho mifanaraka tsara indrindra ho an'ny fiaramanidina miasa ao amin'ity fitaterana ampahany"kosa, UAC ny filoha Yury Slyusar dia nanambara fa ny orinasa-pianarana mpandraharaha ny SSJ karazana dia"dingana manan-danja"[UAC] raharaham-barotra ny fampandrosoana."Mihevitra isika fa ny raharaham-barotra dikan' ny SSJ mety ho ny vokatra tsy manam-paharoa ho an-tsena toy izany no hanomezana ny tandrify isaky ny haavon'ny fampiononana sy ara-toekarena ny fahombiazan'ny"dia nanome toky. Ny fandinihana dia naverin'ny VEB-Leasing ny tale jeneraly Artyom Dovlatov izay manaiky fa ny taratasy ny finiavana dia manana fiantraikany tsara eo amin'ny SSJ fandaharana, dia toy izany no manampy ny endrika"mifaninana vokatra sy ny tsena vaovao akany"Lebedev dia tsy voalaza ao amin'ny fomba ofisialy ny asa fanaovan-gazety famotsorana azy saingy, nanazava ny foto-kevitra ao May, dia nanolo-kevitra fa ny zotram-piaramanidina dia mampiasa ny"club"foto-kevitra."Ny iray amin'ireo safidy ho fametrahana ny petra-bola averina any NRB [ny banky, ao anatin'ny-Pirenena Reserve Corporation] ho an'ny, roubles [US$, ], ohatra"Lebedev ny zava-nitranga teo aloha eo amin'ny ara-pananahana orinasa ahitana ny tsipelina ho toy ny Aeroflot petrabola ao amin'ny vanim-potoana ny taona hatramin'ny taona, saingy izy dia tsy afaka ny hahita ny fahaizana miara-miasa amin'ny fiaramanidina ny fitantanana. Izy ihany koa dia mpiara-tompony lessor Ilyushin ny fitantanam-Bola ny Orinasa sy ny affiliate-Mena Elany zotram-piaramanidina. Tamin'ny izy nivarotra isan-jato ny zotram-piaramanidina ny lessor. Amin'ny taona, Sukhoi Fiaramanidina Sivily nanambara fa nanana ny kajy fa ny fanatanjahan-tena rivotra fitateram-tsena dia mendrika mihoatra ny US$m isan-taona, ary tonga niaraka tamin'ny hevitra ny Sukhoi Sportjet, fiaramanidina iray vita fanoloran-tena mba manidina fanatanjahan-tena ekipa. Fa rich saina tetikasa, izany dia takatra, dia satria efa mangina intsony.
Rosiana Roa Hitarika Fisaraham-Panambadiana Alalan 'Ny Fanorenana Ny Manda Ny Alalan' Ny Foibe
Toy ny hoe tsy hafahafa ampy, ny roa nahazo ny fankatoavana ny fitsarana rosiana tamin'ny fiandohan'ity taona ity, momba ny hevitraNy rindrina efa natao fa tapa-tompony Margareta Tsivtnenko dia tanteraka voasakana eny amin'ny ambaratonga ambony ny an-trano, toy ny tsy misy tohatra ao amin'ny ny antsasaky ny trano. Margareta hoy izy fa tsy manana fotoana na vola mba hanorina faharoa tohatra mialoha ny ekipa ny mpanao trano, dia nanome baiko ny vadiny naorina ny fotsy rindrina biriky."Izaho sy ny zanako lahy dia manana sakafo maraina rehefa mpanao trano no tonga tao an-trano, mitaritarika amin'ny vato simenitra"hoy izy nanoratra tao amin'ny mpampanoa lalàna rosiana ny Fakan-kevitra."Ny fitsarana ofisialy tonga loatra, nitondra ny fanambarana ny filazana fa tsy tokony ho nanao ny tohatra avy izao. Ny mpanan-karena mpivady, izay manan-janaka telo miaraka, raraka tamin'ny ary nandany ny ankamaroan ny enin-taona eny amin'ny fitsarana an'i tsirairay. Raha ny fisaraham-panambadiana dia finalised ny fitsarana nandidy azy ireo mba nizara ny fananany eo izy ireo, saingy ny tena zava-pananana dia ny trano ao Mosko, mendrika manodidina ny $.
Margareta nilaza tamin'ny fampitam-baovao rosiana tsy te hivarotra ny trano toy ny"rosiana real estate tsena ao anatin'ny krizy"ary izy ireo tsy nahazo fifanarahana tsara ho azy.
Sergei Tsivtnenko mipetraka ao amin'ny trano vaovao ny vaovao vadiny, ary zara raha mampiasa ny lafiny Moskoa trano.
Rosiana Revolisiona Rosiana Ny Lalàna Fakan-Kevitra
State of Psychiatry di Rusia - Jiwa Kali